Vatongi 7 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Gidhiyoni nevarume vake 300 (1-8)
Uto raGidhiyoni rinokunda vaMidhiyani (9-25)
“Bakatwa raJehovha neraGidhiyoni!” (20)
Vanhu vanovhiringidzika mumusasa wevaMidhiyani (21, 22)
7 Jerubhaari, kureva Gidhiyoni,+ akabva amukira nevanhu vese vaaiva navo, akadzika musasa paChitubu cheHarodhi, musasa wevaMidhiyani uri kuchamhembe kwake pachikomo cheMore chaiva mubani. 2 Jehovha akabva ati kuna Gidhiyoni: “Vanhu vauinavo vakawandisa kuti ndiise vaMidhiyani muruoko rwavo.+ Nekuti Israeri angazozvikudza pamberi pangu achiti, ‘Ruoko rwangu ndirwo rwandiponesa.’+ 3 Ndapota, iye zvino taura pamberi pevanhu uchiti, ‘Munhu wese ari kutya uye ari kudedera, ngaadzokere kumba.’”+ Saka Gidhiyoni akavaedza. Vanhu 22 000 vakabva vadzokera kumba, pakasara 10 000. 4 Asi Jehovha akati kuna Gidhiyoni: “Pachiine vanhu vakawandisa. Ita kuti vadzike kumvura kuti ndinokuedzera vanhu vacho ikoko. Kana ndikati kwauri, ‘Uyu achaenda newe,’ munhu iyeye ndiye achaenda newe, asi kana ndikati kwauri, ‘Uyu haaendi newe,’ munhu iyeye haazoendi.” 5 Saka akatora vanhu akaenda navo kumvura. Jehovha akabva ati kuna Gidhiyoni: “Paradzanisa vanhu vese vanonwa mvura muruoko rwavo vachikapa sezvinoita imbwa, kubva pane vaya vanonwa mvura vakapfugama.” 6 Vaya vaikapa mvura vachiisa maoko avo kumiromo yavo vaiva varume 300. Asi vamwe vanhu vese vakanwa mvura vakapfugama. 7 Jehovha akabva ati kuna Gidhiyoni: “Ndichakuponesai ndichishandisa varume 300 vaita zvekukapa mvura, uye ndichaisa vaMidhiyani muruoko rwako.+ Asi vamwe varume vese ngavadzokere kumba.” 8 Saka pashure pekunge vatora mbuva nehwamanda kubva kuvarume vacho, Gidhiyoni akaendesa vamwe varume vese vaIsraeri kumba, akangosara nevarume 300. Musasa wevaMidhiyani waiva zasi kwake, mubani.+ 9 Usiku ihwohwo, Jehovha akati kwaari: “Simuka urwise vaMidhiyani, nekuti ndavaisa muruoko rwako.+ 10 Asi kana uchitya kurwisa, dzika kumusasa wacho naPura mushumiri wako. 11 Teerera zvavachataura, uye pashure pacho uchava neushingi hwekurwisa musasa wacho.” Iye naPura mushumiri wake vakabva vadzika vachienda pedyo neuto rakanga rakadzika musasa. 12 Panguva iyi vaMidhiyani nevaAmareki neVekumabvazuva+ vese vakanga vakazara mubani semhashu, uye ngamera dzavo dzakanga dzisingaverengeki,+ dzakawanda sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa. 13 Gidhiyoni akabva asvika, akanzwa mumwe murume achirondedzera hope dzake kushamwari yake achiti: “Hedzino hope dzandarota. Panga paine chingwa chebhari cheraundi changa chichikunguruka chichipinda mumusasa wevaMidhiyani. Chasvika pane tende chikarirova zvine simba zvekuti rabva radonha.+ Chokwadi chapidigura tende racho, uye tende racho rabva rati pasi pwatata.” 14 Shamwari yake yakabva yati: “Hapana chimwe kunze kwebakatwa raGidhiyoni+ mwanakomana waJoashi, murume wekwaIsraeri. Mwari aisa vaMidhiyani nemusasa wese muruoko rwake.”+ 15 Gidhiyoni paakangonzwa murume wacho achirondedzera hope dzacho nekududzirwa kwadzo,+ akakotama kuti anamate. Pashure paizvozvo akadzokera kumusasa wevaIsraeri akati: “Simukai, nekuti Jehovha aisa musasa wevaMidhiyani mumaoko enyu.” 16 Akabva akamura varume vaya 300 kuva mapoka matatu akavapa vese hwamanda+ nezvirongo zvihombe, mwenje iri mukati mezvirongo zvacho. 17 Akati kwavari: “Nditarisei munyatsotevedzera zvandichaita. Pandinosvika pamucheto pemusasa, munofanira kunyatsotevedzera zvandichaita. 18 Pandinoridza hwamanda, ini nevanhu vese vandiinavo, imiwo munofanira kuridza hwamanda kumativi ese emusasa, moshevedzera kuti, ‘RaJehovha neraGidhiyoni!’” 19 Gidhiyoni nevarume 100 vaaiva navo vakasvika pamucheto pemusasa panguva yaitanga kurinda kweusiku kwechipiri,* varindi vachangoiswa. Vakaridza hwamanda,+ vakaputsa zvirongo zvaiva mumaoko avo.+ 20 Saka mapoka acho matatu akaridza hwamanda, akaputsa zvirongo. Vaiva nemwenje mumaoko avo eruboshwe uye vakaridza hwamanda dzaiva mumaoko avo ekurudyi ndokushevedzera vachiti: “Bakatwa raJehovha neraGidhiyoni!” 21 Nguva yese iyi, murume mumwe nemumwe akanga akamira panzvimbo yake, vakakomba musasa, uye uto rese rakamhanya, richishevedzera richitiza.+ 22 Varume 300 vakaramba vachiridza hwamanda, Jehovha akaita kuti bakatwa remumwe nemumwe rirwisane neremumwe mumusasa wacho wese;+ uye uto racho rakatiza rikanosvika kuBheti-shita, nekuZerera, nekunoperera Abheri-mehora+ iri pedyo neTabhati. 23 Uye varume veIsraeri vakaunganidzwa vachibva kwaNaftari, Asheri, nekunharaunda yese yaManase,+ uye vakadzingirira vaMidhiyani. 24 Gidhiyoni akatuma nhume munyika ine makomo yaEfremu yese, achiti: “Burukai munorwisa vaMidhiyani, moenda kunomira kumazambuko kuBheti-bhara neJodhani kuti vatadze kuyambuka.” Saka varume vese vaEfremu vakaunganidzwa pamwe chete, uye vakavavharidzira pamvura yacho kunosvika kuBheti-bhara neJodhani. 25 Vakabatawo machinda maviri evaMidhiyani, Orebhu naZeebhu; vakaurayira Orebhu padombo raOrebhu,+ uye vakaurayira Zeebhu pachisviniro chewaini chaZeebhu. Vakaramba vachitevera vaMidhiyani,+ vakaunza musoro waOrebhu newaZeebhu kuna Gidhiyoni munharaunda yeJodhani.
^ Kubva kuma10:00 dzeusiku kusvika kuma2:00 dzeusiku.